गतहप्ता नेपालको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विदादेवी भण्डारीले गर्नुभएको संसद भङ्गलाई बदर गरिदिएपछि मुलुक अर्को भूमरीमा फसेको छ । यो घटनामा आन्दोलनकारी ओली विरोधीहरूलाई लड्डुखुशी भए पनि शनै शनै यो तापक्रम चिस्सिदै गएको छ । यो फैसलाले ठूलो जनधनको क्षतिको सम्भाबनालाई टारेको छ । आन्दोलनकारीहरूले मांसाहारी शब्दको समेत उच्चारण गरेका थिए । यति हुँदा पनि समाजले पचायो, नेता तर्सिएनन, जनता चूप लागे ।
जेहोस्, पाएको आएको आदेशलाई शिरोपर गर्दै, विवादहरू थाँती राखेर यी सबै खालेहरू नयाँ नयाँ रणनीतिमा लागेका छन् । आउँदो २३ गते संसद अधिवेशन डाकिएको छ । निरंकूश भनिएका र संकटकाल लगाउने त्रास फैलाउनेहरू प्रम ओलीले संसद बोलाउने निर्णय गरेपछि जिल्ल परेका छन् । अब राजनीति ओलीलाई फाल्ने र सत्ता कब्जा गर्ने खेलमा केन्द्रित हुनपुगेको छ । सत्तारूढ दलभित्रकै एउटा खेमा जसरी पनि ओलीलाई गलहत्याउने खेलमा लागेको छ भने ओली समूह जसरी पनि आफू सत्तामा कायमै रहने दाउमा देखिन्छ । सांसदहरू कालो पैसाद्वारा किनबेचका बस्तु बन्नेछन् । विदेशी ताकत नेपालको सत्ता लडाइमा निर्णायक हुन अग्रसर भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट त्यस्तो फैसला कसरी आयो ? त्यो विवेचना हुँदैगर्ला । तर नेपाली राजनीति पुरै सत्ता लडाइमा होमिन पुगेको छ । आधुनिक महाभारत देखिने अवस्था छ ।
हामी नेपाली र नेपाललाई फाइदा के भयो ? प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री नहुने भाषण गर्छन्, पेश गरिसकेको अविश्वासको प्रस्तावमा आफ्नै नाम राख्छन् । अनि अहिले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न ‘कम्फर्टेबल मै हुँ’ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उता सके आफै नसके शेरबहादुरलाई सरकार सुम्पन प्रचण्ड–माधवमात्र होइन, केपी ओलीसम्ेत लागेको देखिन्छ । बाबुराम भट्टराई, माधव नेपालहरू पनि दौडमा छन् । सबैको दाउ भारतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री टिक्ने, हुने रहेको छ । नेकपाको झगडाले नेपालको स्थिरता चौपट बनेको छ । असमयमै राजनीति भताभुङ्ग अवस्थामा गइसक्यो ।
अब संसदमा मारामार हुनेछ । किनबेचदेखि अनेक व्यभिचार देखिने छन् । सडकमा भीड देखाउने देखि सरकार स्वयम् आन्दोलनमा जान्छौं भनेर अग्रसर भएको पनि देखियो । नागरिक समाजले राजनीति बगारेको पनि सुनियो, देखियो । यतिबेला सरकारका मन्त्रीहरू हिम्मत भए सरकार फाल्न चुनौती दिन थालेका छन् । केपी ओली कुनै पनि चुनौती फेस गर्न तैयार छन् भनेर मन्त्रीहरू धमास दिइरहेका छन् । नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह नैतिकताको हौवा देखाएर र ओली मान्छे होइनन् भनेर तिक्तता पोखिरहेका छन् । नेकपाका दुई खेमा एकले अर्कोलाई नङ्ग्याउन ज्यान फालेर लागेको देखिदैछ ।
हेर्नु छ, नेकपाभित्र ओली कि प्रचण्ड कित्ता बलियो छ ? यसको नजारा २३ गते संसदमा देखिनेछ । यस्ता गतिविधिलाई आमनागरिक हेरिरहेका छन् । विश्लेषकहरू भन्छन्– नागरिकले आफ्नो अधिकार बिर्सेका छन् र राजनीतिक कित्ता कित्तामा बाँडिएका छन् । आफूले चुनेका प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने के हो ? त्यो नागरिक कोही पनि भन्न अग्रसर हुँदैनन् । सबैले अनुमान गरेका थिए, अदालतको फैसलापछि ओली हट्छन् । तर ओली झन शक्तिशाली भएको देखियो । संवैधानिक अलमलमा त प्रचण्ड माधव कित्ता नै फसेको अवस्था देखियो ।
सरकारले ३ वर्षमा राम्रो काम गरेन । भ्रष्टाचार ग¥यो, भ्रष्टाचारको साक्षी बस्यो । २३ गते बस्ने संसदको प्रमुख मुद्दा देशका हुने छैनन्, केही व्यक्ति सत्तामा जाने र सत्ताकालाई हटाउने हुनेछ । जनताको जनजिविकाको कुनै मुद्दा उठाइने अवस्था रहनेछैन । जनता गजबका छन्, नेताका लागि जुलुस निकाल्छन्, जनतालाई ज्याला भए पुग्ने देखियो । सरकारले र सरकार इतरकाले गरेका विकृति र बिसंगतिका बारेमा जनता बोल्दैनन् । सरकारले आह्वान गरे पनि, विपक्षीले आह्वान गरे पनि लाखौंको संख्यामा जुट्ने जनता आफ्ना लागि, देशका लागि पटक्कै जुट्दैनन् । उता राजावादीहरू पनि लाखौंको संख्यामा जुलुस निकाल्छन् । जुलुसले मात्र अब केही परिवर्तन ल्याउलाजस्तो लाग्दैन ।
कस्ता अविवेकी जनता ? हामी कस्ता नेपाली ? झापा हत्याकाण्डदेखि जनयुद्धसम्मका हत्याकाण्डहरूको सारांश के थियो ? ती काण्डहरू सञ्चालन गर्नेहरू अहिले के गरिरहेका छन् ? यिनले देशको नामोनिशान मेटाउने खेलमा आफूलाई अभ्यस्त पारिरहेका छन् । नेपालमा राजतन्त्र होइन, निरङ्कूशता फाल्ने कुरा थियो, राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र नै फालिदिए । निर्णायक जनता हुन्, तिनलाई विभाजन गरेर हली गोठाला बनाइएको छ । लोकतन्त्रमा योभन्दा ठूलो अपराध के हुन्छ ? अचम्म अपराधवोध भने कसैले पनि गरेका छैनन् ।
जनताले यस्ता नेताको गुणगान गाउन कसरी मिल्छ ? युवा नेताहरूले यस्ता नेताको पछि पछि दगुर्न कसरी मिल्छ ? अन्य मुलुकहरूमा खराव काम गर्नेहरू जनताबाटै दण्डित हुन्छन्, नेपालमा ज्यानमाराले पनि ५० किलोको माला र बाजागाजासहित विजयोत्सव मनाउँछन् । यो अतिबाट खति बढी भयो । जनताले बोल्नुपर्दैन अब पनि ? मुलुक नेकपाभित्रको झगडाले र नेताहरूमा नैतिकताको अभावले द्वन्द्वमा फस्यो । नैतिकता न ओलीमा छ, न प्रचण्ड–माधवमा ? न देउवामा छ, न अन्य साना दलका नेताहरूमा । सबैथोक छ, मात्र नैतिकता छैन । नैतिकविहीनहरूको मुलुक बन्यो नेपाल ।